« JMJ » andiany faha-9: 100 000 ireo mpizaika andrasana any Mahajanga | NewsMada
« JMJ » andiany faha-9: 100 000 ireo mpizaika andrasana any Mahajanga
Hatry ny omaly, mbola betsaka ireo tanora mpino katolika mihazo ny lalam-pirenena fahefatra hamonjy ny “JMJ” any Mahajanga. Efa analiny ihany koa ireo efa tonga any Mahajanga amin’izao fotoana izao.
Manodidina ny 100 000 ireo mpizaika andrasana any an-tpoerana, raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra. Tobim-pivavahana 13 sy toeram-pandraisana malalaka 52 no efa voaomana ho an’ireo tanora rehetra tonga any. Ankoatra izany ny toby lehibe any Belobaka hanaovana ny famaranana ny lanonana ny asabotsy sy alahady izao.
Efa samy nanana ny fandaminany avy ny isaky ny paroasy amin’ny fivahiniana any Mahajanga. Iraisana kosa ny fandaharam-potoana, hiompana amin’ny vavaka.
Nisy amin’ireo mpizaika sasany toy ny avy any Maroantsetra ny nandeha dia an-tongotra nandritra ny efatra andro nihazo an’i Mandritsara. Teo vao naka fiara hihazo an’i Mahajanga hamonjy ity zaikaben’ny tanora katolika ity.
Hanomboka amin’ny fomba ofisialy, anio hariva, ny amin’ny alalan’ny lamesa lehibe ny “JMJ” andiany fahasivy hatao any Mahajanga. Hosokafana rahampitso kosa ny fampirantiana hanehoana ireo tantaran’ny finoana katolika.
Any Mahajanga, feno mpizaika ny tanàna. Mandray vahiny analiny ny any an-toerana ary efa nivonona ny amin’izany ny rehetra. Nampitombo ny entana amidiny ireo mpivarotra hanomezana fahafaham-po ireo mpivahiny any an-toerana.
Na izany aza, efa nivatsy izay ilaina avy any amin’ny toerana nihaviany avy ihany ireo tanora mba hisorohana amin’ny mety tsy fahampiana rehefa tonga any. Anisan’izany ny kitay ahandroana sakafo, ny legioma, vary sy ny kojakoja ilaina…